Waddan African ah oo diyaariyey Tuulo u gaar ah dumarka oo aan ragga loo ogolayn! – XOGMAAL.COM
Waddan African ah oo diyaariyey Tuulo u gaar ah dumarka oo aan ragga loo ogolayn!
Dowladda dalka Masar ayaa diyaarisay Tuulo lagu magacaabo Al-Samaaxa oo loogu talo galay kaliya in ay ku noolaan karaan kana shaqaysan karaan haweenku oo aan ragga loo ogolayn gaar ahaan haweenka Carmasha ah, kuwa guurku ka raagay ee doonaya in ay kalidood noolaadaan iyo kuwa dhawaan uun la furay ee aan haysan rag ay nolosha la wadaagaan.
Tuuladan oo 120 Km u jirta magaalada Aswaan ayaa leh dhul Beeraha iyo wax soo saarka ku wanaagsan iyadoo sidoo kale laga helayo xaywaanka rabbaayadda ee wehliya dadka sida Digaaga, Dameeraha iyo kuwa la midka ah, waana deeggaan loogu tala galay in ay haweenku waxna ka beertaan xayawaaannadana ku dhaqdaan oo ay noloshooda ka soo saaraan si ay u kafaalo qaadaan noloshooda iyo kuwa ubadka haysta ee lagu furay.
Qorshaha tuuladan lagu aasaasay ayaa soo bilaabmay sannadkii 1998-kii wakhtigaasi oo xukuumaddii waddanka Masar ka talinaysay ee uu hormuudka u ahaa Maxamed Xusni Mubaarak ay tuuladan u qorshaysay in ay haween kaliya ku noolaadaana ama wax ku qabsadaan oo ay noqoto tuulo wax soo saar oo haweenka u gaar ah oo aan ragga loo ogolayn in ay deggaan ama ku shaqaystaan.
Waqtigaasi mashruucani waxa uu ahaa in la dhiso laba tuulo oo mid ka mid ahi ay tahay tuuladan Al-Samaaxa iyo tuulo kale waxaana qorshuhu yahay in ay midkiiba ku noolaan karaan in ka badan 303 qoys oo haween iyo caruur ah. Waa haweenka caadiga ah iyo kuwa haysta ubad yaryar oo lagusoo furay. Waxa ay xukuumadda dalkaasi Masar haweenay kasta u qorshaysay in ay siiso guri yar oo laba qol ah iyo beer weyn oo u dhaw oo wax soo saarka ku wanaagsan iyada oo laga caawin doono dhinaca wax soo saarka iyo xayawaannada beertaasi ay ku dhaqan karaan sida Lo’da, Adhiga iyo dameeraha ay ku shaqaysan karaan ee ay kaga xoogsan karaan wax soo saarka beerta. Waxaase shardi ah in haweenaydu ay diyaar u tahay wax soo saar oo aanay u qaadan in meeshan loo dajinayo in ay iska fadhido.
Wargeyska Al-Misry oo arrinkan xiisaha leh baahiyay ayaa qoray ayaa in Mashruucani dhigayo in haweenay kasta oo isku dayda in ay nin guursato aan loo ogolayn in ay ku sii noolaato tuuladan Al-Samaaxa ee loo ogol yahay in ay isaga guurto oo ay doorato ninka ay guursatay si ay ugu guuraan meesha kale ee ay ku noolaan karto. Sidaa darteed haddii la xaqiijiyo in mid ka mid ah haweenka tuuladan ku nooli ay nin si qarsoodi ah u guursatay waxa laga qaadayaa beerta iyo guriga waxaanay u guuraysaa meel ay kula noolaan karto ninkaasi ay calmatay.
Wasiirka Arrimaha Qoyska ee dalka Masar oo wax laga waydiiyey Arrinkan ayaa sheegaya in ujeedada laga leeyahay mashruucani tahay in la ilaaliyo mustaqbalka haweenka iyo ubadkaasi oo ay noloshooda ku maareeyaan si loo daryeelo haweenkaasi oo ah kuwo nugul.
Howl-wadeen ka tirsanaa Shirkada Hormuud oo lagu dhex diley Xafiiskiisa
Madaxda maamul goboleedyadda oo kusoo wajahan Muqdisho